सुनको भाउ लगातार ओरालो; आजपनि घट्यो तोलामा कति? हेर्नुहोस्.. – Khabar PatrikaNp
August 24, 2020 497
आज सातको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा गिरा,वट आएको छ ।
शुक्रबा,र प्रतितोला, ९८ हजार ८ सय रुपैयामा कारोबार भएको छापावाल सुनको, मूल्य आज ४ सय रुपैयाले घ,टेर प्रतितोला ९८ हजार ४ रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य, पनि घ,टेर प्रतितोला ९७ हजार ९ सय रुपैयामा कारोबार, भइरहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य, प्रतितोला, १ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबा,र भइरहेको, जनाइएको, छ
यी हुन् पाइल्स रोगबाट केही दिनमै छुटकारा दिने अचुक घरेलु औषधी
काठमाडौँ । पाइल्स एउटा यस्तो रोग हो, जसमा शरीरका विशेष हिस्सामा हरेक समय पीडा र जलन महशुस हुने गर्दछ।पाइल्सका रोगीका साथ सबैभन्दा ठुलो समस्या यस विषयमा डाक्टरलाई बताउनु हो। तर, यो गलत हो। डाक्टरसँग सल्लाह लिएर यसको उपचार गर्नु आवश्यक छ। औषधिका साथसाथ घरेलु उपायबाट पनि केही दिनमा तपाई यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्नु हुन्छ।
पाइल्स रोकथाममा पनि मुलाभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन। मुलाको नियमित र सही प्रयोगबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या केही महिनामै समाधान हुने गर्दछयसको सबैभन्दा ठुलो फाइदा यो हो कि मुलाको नियमित सेवनबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या बढ्दा पनि बढ्दैन। पाइल्सका रोगीहरुलाई सामान्यतः मुला खान सल्लाह दिने गरिन्छ।यसको सबैभन्दा ठुलो कारण हो, मुलामा डाइट्री फाइबर्स पाइने गर्दछ । यसले स्टुललाई मुलायम गर्न सहयोग गर्दछ। यसबाट पाचन प्रक्रियापनि राम्रो हुन्छ।मुलामा कयौ यस्ता तत्व पाइन्छ, जुन पाइल्सका भएपछि हुने पीडा कम गर्न सहयोगीसिद्ध हुन्छ। यसका साथै मुलाले चिसो बनाउने काम पनि गर्दछ, जसबाट जलनमा पनि राहत प्राप्त हुन्छ।
पाइल्स रोगीले काँचो मुला सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तपाई चाहनु हुन्छ भने यसलाई पिँधेर पनि सेवन गर्न सक्नु हुन्छअझ तपाई मुलाको रस निकालेर पनि पिउन सक्नु हुन्छ । मुलाको रस सेवन गर्दा भने एकपटक चिकित्सकको सल्लाह आवश्य लिनुस् । तपाई मुलाको प्रयोग संक्रमित स्थानमा जलन शान्त पार्न लगाउन पनि सक्नु हुन्छ । अहिले त बजारमा मुलाको पाउडर पनि सहजै पाइन्छ।
त्यस्तै घ्यु कुमारीको गुदी पाइल्स का रोगीका लागि धेरै उपयोगी हुन्छ। पाइल्सका कारण मलद्वार दुख्ने वा पोल्ने हुन्छ। त्यसैले विस्तारै घिउकुमारीको गुदी लगाउने जसले शीतलता प्रदान गर्छ।काँचो केरा उसिनेर बिहान,बेलुका खाँदा पनि फाइदा मिल्छ।
Prevऑफुले चाहेको कुराहरू प्राप्त गर्नका लागी यो मन्त्रको जप गर्नुहोस… ॐ ॐ ॐ
Nextडेढ महिनाकी छोरी आइसीयुमा, बुवाको “दुबईमा” करेन्ट लागेर मृत्यु !
भोलि दोस्रो महानपर्व ‘तिहार’ भाइटिकाः यस्तो छ शुभ साइत